दोलखामा उम्मेद्वारहरु टुङ्गो लगाउँदै दलहरु - Awajonline Online Newspaper
दोलखामा उम्मेद्वारहरु टुङ्गो लगाउँदै दलहरु
आवाज संवाददाता ३ बैशाख २०७४, आईतवार
दोलखा, ३ बैशाख
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनैतिक दलहरु पनि मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न जुटेका छन् । राजनैतिक दलहरु दिनहुँजसो गाउँगाउँ र काठमाडौँको सम्पर्क मञ्चमार्फत कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छन् ।
विशेष गरी नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा छुट्टै समूह बनाएर कार्यक्रममा जुटेका छन् । पार्टीका नेताहरु गाउँ भेला, टोल भेला र घरदैलो समेत गर्दै छन् ।
चुनावमा जुटेका दलहरू उम्मेद्वारको टुंगो लगाउन र आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न व्यस्त छन् । सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको दोलखामा स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
तीनै दलका तल्लो तहका कमिटीले उम्मेद्वार चयन सकभर सर्वसम्मत र नसके जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गर्न थालेका छन् । नेपाली काँग्रेसले मेलुङ गाउँपालिका काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको भेलामार्फत गाउँपालिका प्रमुखमा वर्मा लामाको नाम घोषणा गरेको छ ।
कांग्रेसले तामाकोसी गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार टुंगो लगाएको छ । प्रमुखमा भवेन्द्र कार्की र उपप्रमुखमा सिर्जना सुवेदीको नाम तय गरेको हो । एमालेले गौरीशंकर गाउँपालिकामा प्रमुख हलेश्वर मावि सुरीका शिक्षक स्वयम् खड्का र उपप्रमुखमा जुँगूकी उर्मीला थामीको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट ३ र ४ नम्बर वडा लामिडाँडामा बालानन्द शिवाकोटी र लोकराज पाठक, ५ र ६ लापिलाङमा सहदेव खड्का र मानबहादुर बस्नेत, ७ र ८ सुनखानीमा तीर्थ शिवाकोटी र संग्रामबहादुर आचार्य र ९ सुन्द्रावतीमा रामप्रसाद मैनाली वडाध्यक्षका उम्मेद्वार भएका छन् । सुन्द्रावतीमा माओवादी केन्द्रले नविन्द्र थामीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सोही गाउँपालिकामा एमालेबाट ३ नम्बर वडामा निसान बुढाथोकी, ५ मा सुवास थामी र ९ मा घनश्याम सेढाईं उम्मेद्वार बनेका छन् । एमालेले गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं. ९ मा छिरिङ शेर्पा र वडा नं. ८ मा उमेश गुरुङको नाम टुङ्गो लगाएको छ ।
बिगु गाउँपालिका ९ खोपाचागुमा कांग्रेसका खेमबहादुर खड्का वडाध्यक्ष उम्मेद्वार बनेका छन् । सोही गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा आलम्पुमा पदमबहादुर धामी उम्मेद्वार बनेका छन् ।
भीमेश्वर नगरपालिका १ क्षमावतीमा कांग्रेसबाट भक्तसिंह थामी सहित वडा सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ । सोही वडामा एमालेबाट वीरबहादुर थामी वडाध्यक्ष उम्मेद्वार बनेका छन् । नगरको ३ नम्बर वडा चरिकोटमा कांग्रेसका हरिशरण शिवाकोटी र नेकपा माओवादी केन्द्रले ध्रुव केसीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ । वडा नं. ६ नम्बर चरिकोटमै काँग्रेसका युवराज थापा (राजु) सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनेका छन् । वडा नं. ८ बोचमा काजी बुढाथोकी सहित वडा सदस्यको नाम समेत टुङ्गो लगाएको छ ।
सैलुङ गाउँपालिकामा एमालेले दुई वडाध्यक्ष टुंग्याएको छ । मागापौवाको तल्लो क्षेत्र समेटिने सैलुङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा भरतप्रसाद ढुंगेल र फस्कुको माथिल्लो भाग समेटिने ६ नम्बर वडामा राजु खड्का वडाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका छन् । मेलुङ गाउँपालिकामा कांग्रेसले वडा नम्बर ७ मा कुमार कार्की र एमालेले २ र ३ नम्बर वडामा क्रमशः जितबहादुर भण्डारी र विदुर शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
तामाकोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ भिरकोटमा कांग्रेसले महेश काफ्ले र एमालेले ज्ञानेन्द्रराज केसीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । यस्तै एमालेले सोही गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा च्यामामा झनकबहादुर फुँयाल र ५ नम्बर वडा सहरेमा राजकुमार रोकालाई अध्यक्ष उम्मेद्वार चयन गरेको छ । जिरी नगरपालिका ३ मा कांग्रेसबाट अशोक केसी वडाध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका छन् ।
चुनावी तयारी र उम्म्द्वार टुङ्गो लगाउन राप्रपा र नयाँ शक्ति पार्टीले पनि आन्तरिक तयारी गरेका छन् । राप्रपाले उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो नलगाए तापनि पार्टी बैठक मार्फत नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्दैछ । राप्रपाले विगु गाउँपालिका प्रमुखमा सुन्दरप्रकाश खड्का, जिरी नगरपालिका प्रमुखमा रामकाजी खड्का र भीमेश्वर नगरपालिका प्रमुखमा राजन शिवाकोटीको नाम प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै नयाँ शक्तिले जिल्लास्तर र गाउँपालिका नगरपालिका स्तरीय समिति बनाएर नाम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ ।